काठमाडौं । मुलुकमा कोरानाभाइरसले महामारीको रुप लिने संकेत देखिएपछि यतिबेला डा. गोविन्द केसीको खोजी सुरु भएको छ । नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा देखिएको विकृति विसंगति हटाउन र सरकारी अस्पताललाई सुविधायुक्त बनाउन भन्दै डा. केसी १६औं पटकसम्म आमरण अनशन बसेका थिए ।